Burma Partnership » Statement from the Open Government Partnership Awareness Workshop for Civil Society
By Open Government Partnership Awareness Workshop for Civil Society • January 23, 2015
Open Government Partnership Awareness Workshop for Civil Society
Over 193 representatives from 80 Civil Society Organizations (CSOs) and networks in Myanmar participated in the Open Government Partnership (OGP) awareness-raising workshop in Yangon from 19-20 January 2015. The objective of this workshop was to raise awareness and understand the potential benefits, opportunities, weaknesses and concerns regarding Myanmar’s participation in the OGP in the context of the recent transition process and the political developments in Myanmar since 2011.
The OGP is an organization currently consisting of 68 member countries promoting government transparency, accountability. It aims to increase civic participation and fight corruption throughamultilateral initiative that promotes equal partnership between governments and civil society.
In November 2012, the Myanmar Government announced its intention to becomeamember of the OGP by 2016. The Myanmar Government task force for OGP to implement this was created one day before US President Obama’s second visit to the country. However, this workshop is the first time civil society organizations were notified of the Myanmar Government’s intention of joining this initiative.
The two-day workshop was the first time in which the OGP initiative has engaged substantively with Myanmar civil society. The participants discussed the eligibility and readiness of the Myanmar Government and Myanmar CSOs’ preparedness to participate in the OGP. This was based on OGP’s four key areas that define an open government; fiscal transparency, access to information, public officials’ asset disclosure, and citizen engagement. To be eligible, countries must earn at least 75% of the applicable points in these critical areas. While the Myanmar Government hopes to becomeamember by 2016, it currently has0points.
Based on the two-day discussions, we concluded that the lack of demonstration of political will by the Myanmar Government to engage substantively with civil society poses difficulties in establishing trust in an equal partnership. Furthermore, while the OGP isapositive initiative that we would like to see implemented in the future, the country faces many pressing issues such as amendment of the 2008 Constitution, peace process, human security, and judicial and legal reform that negate the potential for this initiative to thrive.
While CSOs have attempted to engage with the government through mechanisms such as the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), the government in return has not fulfilled its promises of equal partnership with civil society. Although the government espouses the narrative of democratic reform, accountability, people’s participation and transparency to the international community, there has been no meaningful civil society engagement.
The people of Myanmar are struggling with poverty, and human rights violations (such as land confiscation, forced displacement) without proper solutions. The government is increasingly oppressing the movement of civil society organizations and activists which is hindering democratic progress. For example, the arrest and imprisonment of Ma Tin Mar Yee from Mandalay Myanmar Alliance for Accountability and Transparency (MATA) without bail.
Civil society is increasingly concerned by the imposition of new international initiatives that are being led by the government. These initiatives tend to represent the interests of the government and often overlook the complexities on the ground.
Pressing concerns of 2015 need to be addressed and prioritized before initiatives such as OGP can be effective. These include; constitutional reform, justice andagenuine peace process, rule of law, and urgent legal and judicial reform.
The workshop participants have recommendations to the Myanmar Government, international governments and international donors as follows:
To ensure the protection and promotion of the security and social welfare of the people.
To recognize the diversity and independence of civil society organizations, to guarantee their role and space through legal reform and the rule of law, and to recognizeameaningful and equal partnership with civil society.
To take enough time, share information, hold prior consultations and seek suggestions from civil society organizations, respective ethnic armed groups and political forces when undergoing sectorial reforms including new international initiatives such as EITI and OGP in attempts to reengage with the international community.
To international governments and the international donor community:
To try to gain an in-depth understand of the crises that people of Myanmar are facing during the reform process.
To encourage the Myanmar Government to prioritize addressing the 2008 Constitution, achieving justice and genuine peace, legal and judicial reform, and establishing the rule of law, thus creating an environment that adheres to democratic and human rights principles.
To call on the Myanmar Government to effectively address the violations committed against, and the harm suffered by the people during the reform process.
To urge the Myanmar Government to recognize the diversity and independence of civil society organizations, to guarantee their role and space through legal reform and the rule of law and to recognizeameaningful and equal partnership with civil society.
Spectrum – Sustainable Development Knowledge Network
Ko Soe Htun: 0973494367
Ma Nwe Zin Win: 095031246
Ko Thwin Lin Aung: 09795151505
မြန်မာ့အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပွင့်လင်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (Open Government Partnership) အကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ရက်စွဲ။ ။ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ရက်၂၀၁၅ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ယက်ပေါင်း(၈၀)ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၁၉၃) ဦးတို့သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ – ၂၀ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပွင့်လင်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (Open Government Partnership) အကြောင်း အသိပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ OGP တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေ အပေါ်မူတည်၍ ရနိုင်ခြေရှိသော ကောင်းကျိုးများ၊ အခွင့်အလမ်း၊ အားနည်းချက်များနှင့် စိုးရိမ်ဖွယ်များကို သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်မှုများ၊ သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆွေနွေးပွဲသို့ OGP ပံ့ပိုးသည့် ယူနစ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖီလစ်ပိုင်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများမှ OGP ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရနှင့် အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
OGP သည် အစိုးရတစ်ရပ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှုကို မြှင့်တင်ရန် လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၆၈)နိုင်ငံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပွင့်လင်းအစိုးရဖြစ်လာရေးတွင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အစိုးရနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား တန်းတူညီမျှသော မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အကျင့်ပျက် ချစားခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် OGP အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၀င်ရောက်ရေးကို ရည်ရွယ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အမေရိကန် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယခရီးစဉ် မလာရောက်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် မြန်မာအစိုးရ OGP အထူးအလုပ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် OGP နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုများအကြား သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းများ မတွေ့ရသေးပေ။ ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့ အစည်းများမှ မိမိဘာသာစီစဉ်သော OGP နှင့် ပတ်သက်သည့် ပထမဆုံး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်သည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သူများသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ OGP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သော အမှတ်ပေးစနစ်အပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အခြေအနေနှင့် OGP ဖြစ်စဉ်တွင် မြန်မာအရပ်ဖက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ အခန်းကဏ္ဍများကို အဓိကဦးစားပေး ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဆွေးနွေးရာတွင် OGP မှ ပွင့်လင်းအစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်မှုအပေါ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပြည်သူလူထု သတင်းအချက် အလက်ရယူမှု၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဟူသော အခန်းလေးခန်းအပေါ်အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ OGP အမှတ်ပေးစနစ်အရ အခန်းတစ်ခန်းလျှင် အမှတ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခန်းလေးခန်းအတွက် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် အနည်းဆုံးအမှတ် ၇၅ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်သော်လည်း လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သုညအဆင့်သာ ရှိနေသေးသည်။
နှစ်ရက်တာ ဆွေးနွေးမှုများအဆုံးတွင် လက်ရှိအစိုးရမှ အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသမှု မရှိနေခြင်းသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် တန်းတူညီမျှသော မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်ဟု မိမိတို့မှ အလေးအနက် သုံးသပ်သည်။ ထို့အပြင် OGP သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်စေချင်သော အပြုသဘောဆောင်သည့် ကနဦးအစပျိုးကြိုးစားချက်ဖြစ်သည် မှန်သော်လည်း လက်ရှိမိမိတို့နိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တရားမျှတ၍ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ တရားရေးစနစ်နှင့် ဥပဒေများ အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစရှိသည့် စိုးရိမ်ဖွယ်အန္တရာယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ OGP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ OGP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများမှ အောက်ပါ အချက်များအပါအ၀င် စိုးရိမ်ဖွယ်အန္တရာယ်များကို သုံးသပ်ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
၁။ EITI (သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နိုင်ငံတကာစံနှုန်း) ကဲ့သို့သော ယန္တရားမှတစ်ဆင့် အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားကြရာတွင် အစိုးရဘက်မှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တန်းတူညီမျှသော မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုအပေါ် ထားရှိသော ကတိက၀တ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။ အစိုးရမှ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တာဝန်ယူမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်မှုကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားတွင် ဂုဏ်ယူဖော်ထုတ်ပြောကြား နေသော်လည်း လက်တွေ့တွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မပေးနေခြင်းသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း။
၂။ ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့နေရသော ဘ၀ရပ်တည်ရေးဒုက္ခများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရမှုများ (မြေယာများ အသိမ်းခံနေရခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ရွေ့ပြောင်းခံနေရခြင်း) ကို မှန်ကန်ထိရောက်သော ဖြေရှင်းမှုများမလုပ်ပဲ အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အစိုးရမှ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း။ ဥပမာ – မန္တလေးမှ MATA အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော မတင်မာရီကို ပြစ်ဒါဏ် (ထောင်ဒါဏ် သို့မဟုတ် ငွေဒါဏ်) ချမှုအပေါ်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်မပေးပဲ ဖမ်းဆီးထောင်ချ အရေးယူခြင်းက သက်သေပြပါသည်။
၃။ အစိုးရဦးဆောင်၍ အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ သယ်ဆောင်လာသော နိုင်ငံတကာမှ အစပြုလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာအရှုပ်အထွေးများကို ကျော်၍ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကိုယ်စားပြုနေသကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်း။
၄။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တရားမျှတ၍ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရေးနှင့် တရားရေးစနစ်နှင့် ဥပဒေများ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစရှိသည့် တိုင်းပြည်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သော စိုးရိမ်ဖွယ်အန္တရာယ်များကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုအားနည်းခြင်း။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လာသူများမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များသို့ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
၁။ ပြည်သူလူထု၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရန်။
၂။ အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ မတူကွဲပြားမှုနှင့် လွတ်လပ်စွာရပ်တည်မှု သဘောသဘာဝကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လှုပ်ရှားနိုင်မှုနေရာကို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် အာမခံအကာအကွယ်ပေးရန်။ အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး တန်းတူညီမျှသော မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရန်။
၃။ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြန်လည်ဆက်ဆံရန် ကြိုးစားသော EITI နှင့် OGP ကဲ့သို့ ကနဦးအစပျိုးမှုအသစ်များအပါအ၀င် တိုင်းပြည်ကဏ္ဍအသီးသီး၏ မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် လုံလောက်သော အချိန်ယူ၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း ကြိုတင်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ အကြံပြုချက် ရယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလတွင် ပြည်သူလူထုများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော စိုးရိမ်ဖွယ်အန္တရာယ်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိအောင် ကြိုးစားရန်။
၂။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သော ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေး၊ တရားမျှတ၍ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး၊ တရားဥပဒေနှင့် တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍပြုပြင်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဆောင်ရွက်ရေးများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံမူများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းသော ၀န်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရေးကို အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ရေိးု အကြံပြုတိုက်တွန်းရန်။
၃။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ ပြည်သူများ ကြုံတွေ့နေရသော နစ်နာမှုများ၊ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံ နေရမှုများကို အစိုးရက မှန်ကန်ထိရောက်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရေး　အကြံပြုတိုက်တွန်းရန်။
၄။ ပြည်သူလူထုနှင့် အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး တန်းတူညီမျှ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အစိုးရက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုရေး တိုက်တွန်းရန်။
ဤအလုပ်ရဆွးနွေးပွဲကို အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများက ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီး အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီက ပါဝင်ကူညီသည်။
၁။ MATA (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability)
၂။ Spectrum – Sustainable Development Knowledge Network
၄။ Enabling Legal Environment
၁။ ကိုစိုးထွန်း – ၀၉ ၇၃၄၉ ၄၃၆၇
၂။ မနွယ်ဇင်ဝင်း – ၀၉ ၅၀၃ ၁၂၄၆
၃။ ကိုသွင်လင်းအောင် – ၀၉ ၇၉၅၁ ၅၁၅၀၅
Tags: 2008 Constitution, Access to Information, Burma Government, Civil Society Organizations, Donors, Enabling Legal Environment, Extractive Industries Transparency Initiative, Human Security, Judicial Reform, Legal Reform, Myanmar Alliance for Transparency and Accountability, Open Government Partnership, Paung Ku, Peace Process, Political Prisoners, Right to Information, Rule of Law, Spectrum, Statement of the Open Government Partnership Awareness Workshop for Civil Society, Sustainable Development Knowledge Network
This post is in: Economy, Human Rights, International Relations